Wararka - Ma taqaanaa sida loo sameeyo dhalooyinka quraaradaha ah？
Habka wax soo saar ee dhalooyinka quraaradaha badanaa waxaa ka mid ah: Burburi alaabta ceyriinka ah ee badan (quartz sand, ash ash, limestone, feldspar, iwm) si aad u qalajiso alaabta ceyriinka ah ee qoyan, kana saar waxyaabaha ceeriin ee birta ku jirto si loo hubiyo tayada muraayadda. Diyaarinta walxaha dufcadda ah. Ting dhalaalida. Qalabka galaaska waxaa lagu kululeeyaa heerkul sarreeya (1550 ~ 1600 digrii) foornada barkadda ama foornada si looga dhigo inay sameysmaan galaas dareere ah oo isku mid ah, bilaa xumbo, oo buuxiya shuruudaha wax taaj oo kale. OrHormarin. Ku shub dhalada dareeraha ah caaryada si aad u sameyso waxyaabaha galaaska ka sameysan ee qaabka loo baahan yahay, sida taarikada fidsan iyo weelasha kala duwan. Treatment Daaweynta kuleylka. Annealing, daminta iyo habab kale oo la adeegsado, culeyska fekerka, kala-goynta wajiga ama ku dhalaalida dhalada dhexdeeda ayaa laga tirtirayaa ama la soo saarayaa, xaalada qaab dhismeedka muraayada ayaa la badalay.
Marka hore, caaryada waa in la qaabeeyaa oo la soo saaraa. Qalabka muraayadaha dhalada ah wuxuu isticmaalaa ciidda quartz sida walxaha ugu muhiimsan, iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah ayaa lagu dhalaaliyaa dareeraha heerkulka sare, ka dibna lagu duraa caaryada, la qaboojiyaa, la gooyaa, oo la qaboojiyaa si loo sameeyo dhalo dhalo ah. Dhalooyinka dhalooyinka guud ahaan waxay leeyihiin calaamado adag, calaamadaha sidoo kale waxaa laga sameeyay qaabab caaryo ah. Marka loo eego habka wax soo saarka, sameynta dhalooyinka quraaradaha waxaa loo qeybin karaa seddex nooc: afuufid gacan ah, dharbaaxo farsamo iyo wax soo saar isukeen. Marka loo eego halabuurka, dhalooyinka quraaradaha waxaa loo qaybin karaa noocyada soo socda: Marka hore, dhalada soodhada, tan labaad, muraayadda leedhka, tan saddexaad, muraayadda borosilicate
Aaladaha ceyriinka ah ee dhalooyinka dhalada ah waa macdanta dabiiciga ah, dhagaxa quartz, soodhada caustic, nuuradda, iwm. Dhalooyinka quraaradaha waxay leeyihiin heer hufnaan sare oo iska caabin ah daxalka, mana badali doono astaamaha qalabka marka lala xiriiro inta badan kiimikada. Habka wax soo saarku waa mid fudud, qaabku waa bilaash waana la beddeli karaa, adkaantu wey weyn tahay, waa kuleylka u adkaysta, nadiif ah, si fudud loo nadiifiyo, waana loo isticmaali karaa si isdaba joog ah. Maaddaama ay tahay wax baako, dhalooyinka dhalada ah waxaa badanaa loo isticmaalaa cuntada, saliida, aalkolada, cabitaanada, kuwa udgoon, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo waxyaabaha kiimikada dareeraha ah, iwm, waana la isticmaalaa.